painiapulu kpuchie na Ferrero chocolates maka ekeresimesi | Ọrụ On
Paneapple kpuchiri chọkọleti Ferrero maka ekeresimesi
Alicia tomero | 30/11/2021 22:38 | Emelitere ka 30/11/2021 22:39 | Crafts, Ihe eji eme ekeresimesi, Ọrụ ụlọ
Ọ bụrụ na-amasị gị nka na-atọ ụtọ, ebe a bụ otu ị ga-ahụ n'anya. Nke a onye omenkà painiapulu na chocolates Ọ bụ ezigbo ibe inye ekeresimesi a ma nye ihe ịtụnanya dị ụtọ. Anyị ahọrọla obere karama cava ma anyị nọ na-akụ ya Ferrero chocolate gburugburu ya. Iji mechaa, a na-eji obere kaadiboodu na-atọ ọchị na obere eriri jute chọọ akụkụ elu ahụ mma. Nwee obi ụtọ n'ọrụ a!
1 Ngwa ndị m ji mee painiapulu:
Ngwa ndị m ji mee painiapulu:
Otu obere karama cava.
Otu nnukwu igbe nke chọkọletị Ferrero.
Otu mpempe akwụkwọ A4 nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Na karama cava anyị ga-akụ chocolates otu otu, na silicone na-ekpo ọkụ. Anyị ga-eme ya malite na ala, site na isi ya ma anyị ga-etinye ha na-akpụ mgbanaka elu. Anyị ga-abanye na mmalite olu nke karama ahụ.
Ozugbo glued, anyị ga-ese na green cardboard na akwụkwọ painiapulu. Anyị nwere ike ime ya n'efu, ha ga-adị ogologo ma dị nkọ. Anyị na-ebipụ ha.
Anyị na-ekekọta mpempe akwụkwọ na silicone. A ghaghị kpuchie ọnụ karama ahụ, yabụ anyị na-etinye akwụkwọ na ndị ọzọ.
Iji kpuchie oghere dị n'etiti akwụkwọ na chocolates anyị ga-etinye eriri jute. Anyị ga-ekechi ya na karama ahụ ma nye ntụgharị niile dị mkpa ruo mgbe ọ ga-ekpuchi oghere ahụ niile. Anyị ga-ejikọta eriri ahụ na silicone na-ekpo ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Paneapple kpuchiri chọkọleti Ferrero maka ekeresimesi
Osisi Krismas nke yiri painiapulu
Kpakpando agba agba iji chọọ osisi ekeresimesi mma